Ungayimamela njani i-WhatsApp audios ngasese kwintloko yentloko | Iindaba zeGajethi
Ungazimamela njani ii-audios zeWhatsApp ngasese ngokusebenzisa iseti yentloko
Ii-audios zikaWhatsApp ziya zisanda ngokuxhaphakileyo, kwaye asazi ukuba kulungile okanye kubi. Ngapha koko, ngubani ongayifumenanga iaudiyo yemizuzu eliqela yomhlobo onzima osemsebenzini? Ke unokugcina imfihlo yakho, Sikuxelela ubuqhetseba obukuvumela ukuba umamele ii-audios ze-WhatsApp ngasese, nge-earpiece yeefowuni.
Ngeli qhinga limnandi uya kuba nakho ukuligcina Ubumfihlo bamanqaku akho odiyo kuWhatsApp kwaye okona kubaluleke kakhulu, kukuba ukwazi ukubamamela naxa uhamba ngesithuthi sikawonke-wonke ngaphandle kokuphazamisa umntu nokumamela ngokucacileyo.
Into elungileyo ngale nkqubo kukuba kunjalo iyahambelana zombini iifowuni Android kunye iPhoneKe ngoko, ubuqhetseba kunokuthiwa busehlabathini lonke kwaye buya kusetyenziswa ngabo bonke abasebenzisi. Le nkqubo iphunyezwe nguWhatsApp isebenzisa inzwa yokusondela, loo teknoloji itshixa isikrini xa sizisa ifowuni kwindlebe yethu.
Okubalulekileyo kukuba: Ndingazimamela njani ii-audios zikaWhatsApp ngasese ngento eyimfonomfono endiyifumeneyo? Elula, konke okufuneka ukwenze kukukhetha inqaku lesandi njengesiqhelo, hit "play" kwaye ubeke ifowuni ngokuzenzekelayo endlebeni yakho. Isivamvo sokusondela siya kubona ukuba uyibekile ifowuni yakho endlebeni ngokungathi ibiyifowuni eqhelekileyo kwaye emva koko isandi esiphuma kuWhatsApp siza kuphuma ngendlebe.
Yeyona ndlela ipholileyo gcina imfihlo yethu iphezulu kwaye ngaphezu kwako konke ukuze ube nakho ukumamela ngokuchanekileyo ii-audios zeWhatsApp ngaphandle kwesidingo sokuphazamisa nabani na esidlangalaleni. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba xa sikhutshwa yimfonomfono yendlebe siya kuba nayo kufutshane nendlebe ngaphandle kokufumana ukuma okungaqhelekanga kwifowuni, ke iya kuvezwa ngcono.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Ungazimamela njani ii-audios zeWhatsApp ngasese ngokusebenzisa iseti yentloko
Ungazikhubaza njani izaziso ezivela kwi-IGTV entsha kwi-Instagram